DataNumen: Abathengisi kwakhona
Fumana umthengisi okufutshane nawe:
Nxibelelana namashishini endawo anikezela ngenkxaso DataNumen iimveliso. Uqeqesho lobungcali kunye neenkonzo zokudibanisa ezivela kwi DataNumen Umthengisi uya kukunceda ufezekise eyona mbuyekezo iphezulu kutyalo-mali lwakho:
Global SHI International Corp Ifowuni: + 1-888-764-8888
Idilesi: IKomkhulu le-SHI
I-290 Davidson Avenue
Global SoftwareONE Ifowuni: + 41 44 832 41 69
idilesi: SoftwareONE AG | Indlunkulu
Global COMPAREX AG Idilesi: Leipzig, Jemani
Global CACI International Inc Idilesi: Arlington County, Virginia, USA
Global Insight Enterprises Ifowuni: + 1-800-467-4448
Idilesi: Insight kwikomkhulu lehlabathi
I-6820 S. Harl Ave.
Global Synnex Corporation Ifowuni ephambili: + 1-510-656-3333
Ifeksi ephambili: + 1-510-668-3777
Intengiso: + 1-800-756-9888
44201 INobel Drive
I-Fremont, CA 94538
Jemani Isoftware yeCCP GmbH mfono: + 49 6421 1701-0
idilesi: Isoftware yeCCP GmbH
Indiya Select Software (I) Pvt. Ltd. Ifowuni: + 91-80-25285265
Ifeksi: + 91-80-25250510
Idilesi: Inombolo 14, Amagumbi eBalaji
Indiya AB&D Software India Pvt. Ltd. Uluhlu lwasekhaya: + 91-080-4111 5871
Ifowuni: + 91 96322 27977
Idilesi: I-AB & D Software India Pvt Ltd.
# 2079, C ibhlokhi, Kodegehalli,
ISahakar Nagar, Bangalore 560092
Bruneyi Cogito Solutions Ltd. Phone: + 852-23976665
Ifekisi: + 852-28775988
Idilesi: Icandelo B, 13 / F., iWinsan Tower,
Indlela ka-98 Thomson,
IWanchai, eHong Kong
iTshayina COGITO SOFTWARE CO.,LTD. Phone: +86-10-68421378, +86-10-68421379
Ifeksi: + 86-10-68703469
Idilesi: Igumbi 1105, C2, Hao Bai Da Sha,
Inombolo 50 Xisanhuan North Road, iSithili saseHaidian,
I-Beijing China 100048
Uzbhekistan Softline Group Ifowuni / ifeksi: +7 (495) 232-00-23
UDerbenevskaya nab. NgoNovemba 7, bld. 8,
EMoscow, eRashiya 115114
I-Commonwealth yamazwe aZimeleyo (i-CIS) kunye namazwe aseBaltic Pba Consult LLC Pba Consult LLC
I-8-3, iYaroslavskaya str.,
EMoscow, 129366, eRashiya
Ifowuni: +7 495 797-89-97
Ifeksi: + 7 495 797-89-85
Rhashiya Syssoft, LLC Ifowuni: +7 (495) 646-14-71 ext. 113
Ipohodniy proezd 4/1, icinyiwe. 111,
EMoscow ngo-125373, eRashiya
Rhashiya Softmap, LLC Softmap, LLC
Ifowuni: +7 (495) 627-69-00
Iba DataNumen umthengisi:
DataNumen inika ithuba abathengisi ukuba benze ingeniso eyongezelelweyo ngokujoyina DataNumen Inkqubo yeQabane lokuThengisa kwakhona. Inkqubo elula yobhaliso iya kukuvumela ukuba ube yinxalenye yezona zikhulu kunye ne-most Inkqubo yokuthengisa imveliso ngempumelelo kwakhona.
Samkela nabani na, kubandakanya abathengisi abongezelelekileyo, abahlanganisi benkqubo kunye nabacebisi abathengisa iinkonzo kunye / okanye ukuncedisa isoftware okanye izixhobo zokusebenza kubasebenzisi bokugqibela ngokuthe ngqo, okanye iinkampani ezenza imveliso yokuthengisa kunye nokwenyusa ngeentengiso zentengiso, iivenkile zesoftware, iivenkile zekhompyuter, isebe iivenkile, iivenkile ezinkulu, njalo njalo.
DataNumen Inkqubo yomthengisi yeyona ilungileyo. Ngoba?
Izaphulelo ziphezulu njenge-65%, zonyuswe ngokwentsebenzo yakho.
Umthengisi omtsha, sinikezela 10% isaphulelo kwangoko. Kwaye kamsinya nje ukuba uthengise ngaphezulu kwelayisensi ezi-5 zayo nayiphi na imveliso kwinyanga ethile, uya kufumana ubuncinci 20% isaphulelo nakuphi na ukuthengwa kwinyanga elandelayo. Kwaye unokufumana isaphulelo ngakumbi ngokuthengisa ngaphezulu, ngoku Landelayo:
Ukuba uthengise ngaphezulu kwe- 5 iilayisensi kwinyanga ethile, siya kukunika 20% isaphulelo kwinyanga elandelayo!
Ukuba ngaphezulu 10 iilayisensi, isaphulelo siya kuba 25%!
Ukuba ngaphezulu 20 iilayisensi, isaphulelo siya kuba 28%!
Ukuba ngaphezulu 50 iilayisensi, isaphulelo siya kuba 35%!
Ukuba ngaphezulu 100 iilayisensi, isaphulelo siya kuba 50%!
Ukuba ngaphezulu 200 iilayisensi, isaphulelo siya kuba 65%!
Thengisa ngakumbi kwaye ufumane ngakumbi! Start Okwangoku!
Qaphela: Ukuba ukuthengisa kwakho kuyehla, isaphulelo siya kuncitshiswa ngokunjalo.
DataNumen iimveliso zithandwa kakhulu.
Kungenxa yoko le nto sikunika isiqinisekiso esiqinisekileyo senqanaba eliphezulu lokuthengisa. Njengenkokeli yehlabathi kubuchwephesha bokubuyisa idatha, sithengise isoftware yethu yokuphumelela ekubuyiseni idatha kumazwe angaphezu kwe-130. Abathengi bethu basukela kumqali weekhompyuter kubacebisi be-IT kunye nabanikezeli beenkonzo zokubuyisela idatha, ukusuka kwimibutho emincinci ukuya kumashishini amakhulu kubandakanya ithamsanqa le-500.
Inkxaso epheleleyo yolwazi.
Ukuba lilungu lethu, ufumana ukufikelela kulwazi olubaluleke kakhulu noluncedo:
ukuthengwa kunye nokukhuphela umlinganiso (inqanaba lokuguqula) kuzo zonke iimveliso
amanyathelo ethu okuthengisa kunye nezaphulelo,
iimveliso zethu ezithengisa kakhulu.
Ukwenza ukuba kwenzeke, siqhuba iindaba ezikhethekileyo postUkungenela abaxhasi kunye nenkxaso evaliweyo yecandelo lokudibana ngolwazi oluninzi lokuthengisa malunga neemveliso zethu. Kuya kukunceda ukhethe ezona mveliso zithengiswayo kwindawo yakho, wenze ngcono ukuthengisa kwakho, kwaye uthelekise ukusebenza ngokuthengisa.
Iiphakheji ezipheleleyo zezinto zokunyusa.
Zonke izinto zokwazisa ngazo zonke iimveliso (ezinje ngenkcazo, intengiso kunye neendlela zonxibelelwano, iibhanile, amabhaso, uphononongo, olona luvo lwabathengi, udliwanondlebe nabaphuhlisi nokunye okuninzi) zihlala zikhona kumaqabane ethu. Awuyi kuchitha ixesha elininzi xa ukhangela ibhena okanye umfanekiso oyifunayo kule ndawo.
Intsebenziswano kunye namaphulo entengiso kunye nentengiso.
Singakwazi ukuqhubeka nokuqhuba amaphulo entengiso kunye nawe. Kukho amaxabiso akhethekileyo kubathengisi, kunye nezaphulelo ezininzi, ukuthengisa ngeholide, iposi ngqo kunye nokunye okuninzi. Ungasoloko usenza isicelo sokufumana izixhobo zentengiso zalo naluphi na uhlobo. Unokujonga kwakhona ukonyuka kwepesenti yekhomishini xa usenza amalungiselelo iindaba postIng, imikhankaso yentengiso, kunye neentengiso. Ngamanye amaxesha side siyifumane imali yokuxhasa ezo zenzo. Unombono? Qhagamshelana nathi!
Inkxaso ekhawulezileyo ihlala ifumaneka.
Nawuphi na umbuzo, iingcebiso kunye nezicelo ziya kuthathelwa ingqalelo kwaye uya kufumana ingxelo ekumgangatho ophezulu ngexesha elifutshane. Nceda usebenzise yethu ifom yengxelo ukubuza nawuphi na umbuzo okanye wenze isicelo malunga nenkqubo yethu yokuthengisa kwakhona.
Uyenza njani i-start
Inkqubo yethu yomthengisi ilawulwa ngu MyCommerce.com, inkokheli yehlabathi kwiinkqubo zokuthengisa isoftware. Inkqubo ilula kakhulu. Akukho zifihliweyo costkwaye kunjalo khulula ukuba ubhalise.
Cofa apha ukuze ubhalise iNkqubo yokuThengisa ngoku
Emva kokubhalisa, siya kukuthumela i-imeyile yokuqinisekisa equlethe i-ID yakho yomthengisi. Iakhawunti yakho yomthengisi iya kuba ivunywe kwangoko kwaye ungayisebenzisa ukuthenga iimveliso zethu ngoku, ngolu hlobo lulandelayo:
utyelelo iwebhusayithi yethu kwaye ucofe ikhonkco loku-odola iMyCommerce kwimveliso ehambelana nayo ofuna ukuyithenga.
Kwifom yoku-odola iMyCommerce, kwifayile ye- "Ukubuyisa uMthengi / uMthengisi kwakhona" icandelo, igalelo ID yakho umthengisi kunye negama lokugqitha ukuze ungene. Emva koko unokuthenga imveliso. I-ID yomthengisi inokufumaneka kwi-imeyile yokuqinisekisa yobhaliso esiyithumela kuwe, kwaye igama eligqithisiweyo lelo ligalelo xa ubhalisa.
Ekuqaleni sinikezela nge-10% isaphulelo, kwaye nje ukuba uthengise ngaphezulu kweelayisensi ezi-5 zayo nayiphi na imveliso kwinyanga ethile, uyakufumana isaphulelo ngakumbi nakuphi na ukuthengwa kule nyanga izayo.